I-china TPU Hot melt adhesive film for abakhiqizi bezingubo zangaphandle nabaphakeli | I-H & H.
Ubukhulu / mm 0.05 / 0.06 / 0.08 / 0.1 / 0.12 / 0.15 / 0.2 / 0.25 / 0.3 / 0.35
Ububanzi / m / 1m / 1.4m / 1.5m njengokwezifiso
Indawo yokuncibilika 85-125 ℃
Isikebhe sokusebenza umshini wokucindezela ukushisa: 150-160 ℃ 10s 0.4Mpa
I-HD371B yenziwa ngezinto ze-TPU ngokuguqulwa okuthile futhi kube yi-fomular. Kuvame ukusetshenziselwa ibhande elinemigqa emithathu elingangeni manzi, izingubo zangaphansi ezingenamthungo, iphakethe elingenamthungo, uziphu ongangeni manzi, umucu ongangeni manzi, impahla engenamthungo, izingubo ezisebenza ngemisebenzi eminingi, izinto ezibonakalisayo neminye imikhakha. Ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe kwezindwangu ezinwebekayo ezahlukahlukene ezifana nendwangu yenayiloni nendwangu ye-lycra, kanye nensimu yokubopha ye-PVC, isikhumba nezinye izinto zokwakha. Njengepaki yezingubo zangaphandle / uziphu / ikhava ephaketheni / isandiso sesigqoko / uphawu lokuhweba olufekethisiwe.
1.Umuzwa wesandla othambile: lapho usetshenziswa ekuhlwengweni kwendwangu, umkhiqizo uzoba nokugqoka okuthambile nokunethezeka.
2. Ukumelana nokugeza ukudla: Kungamelana okungenani nokuhlanzwa kwamanzi izikhathi eziyi-10.
5. Iphuzu lokuncibilika okuphezulu: Ihlangabezana nezicelo zokumelana nokushisa.
Ifilimu lokunamathela le-TPU Hot lincibilika lisetshenziswa kakhulu ezingutsheni zangaphandle ezifana no-placket, i-cuff laMination kanye ne-zipper seam seal okuyinto ethandwa kakhulu ngamakhasimende ngenxa yomuzwa wayo othambile futhi okhululekile wokugqoka noma ukwazisa ngobuhle. Futhi kuyinkambiso ngokuzayo ukuthi ukusebenzisa ifilimu elincibilikayo elishisayo lokufaka uphawu ngomphetho esikhundleni sokuthunga kwendabuko.
Ifilimu le-HD371B TPU Hot melt Hot lisetshenziswa kabanzi ebheji efekethisiwe nakwilebula lendwangu elidume ngokwamukelwa ngabenzi bezingubo ngenxa yekhwalithi enobungani bemvelo nokusebenza okulula. Lokhu isicelo kabanzi emakethe.
Langaphambilini Ifilimu lokunamathisela elishisayo lezingubo zangaphandle
Olandelayo: Iteyipu yokunamathisela eshisayo yezingubo zangaphansi ezingenamthungo